Xadka u Dhaxeeya Degaanka Somalida Ethiopia iyo Maamulka Gabaleedka Somaliland oo la Xidhay. – Rasaasa News
Xadka u Dhaxeeya Degaanka Somalida Ethiopia iyo Maamulka Gabaleedka Somaliland oo la Xidhay.
Oct 20, 2011 Xadka u Dhaxeeya Degaanka Somalida Ethiopia iyo Maamulka Gabaleedka Somaliland oo la Xidhay.
Ciidamada maamul gabaleedka Somaliland ayaa todobaadkan bilowgiisii si sharci daro ah waxay uga soo talaabeen xadka degaanka Somalida Ethiopia la leeyahay maamulka, waxayna degaanka dhexdiisa ku dileen dad shacab ah.
Dadka reer miyiga ah ee degan degmooyinka xiga dhinaca xadka maamul gabaleedka Somaliland ayaa marar badan waxaa ka dhex dhaca khilaaf ka dhasha dhulka daaqsinta ah iyo biyaha.
Dhawaan ayuu khilaaf ka dhex dhacay dad reer miyi ah oo degan aaga degmada Yoocaale ee xadka u dhaxeeya Somaliya iyo Ethiopia. Dawlada degaanka Somalida Ethiopia ayaa ku mashquulsanayd sidii ay heshiis uga dhex abuuri lahayd dadka reer miyiga ah sida ay hore u sameeyeen marar hore.
Sida aan ka soo xiganay masuuliyiin ka tirsan dawlada degaanka Somalida Ethiopia, waxay nasiib daro ku timaameen in ciidamo ka tirsan maamulka gabaleedka Somaliland ay ka soo talaabeen xadka kuna laayeen gudaha degaanka shacab Ethiopian ah.
Ciidamada Somaliland oo dhan 8 gaadhi iyo ciidamo saaran ayaa soo galay gudaha, dabadeedna ciidanka New Police-ka ayaa maqlay xabadii ay ku ridayeen shacabka. Ciidamada Newga ayaa baacsaday kagana daba tagay xadka waxayna soo qabteen 60 maleeshiya ah iyo 7 gaadhi dhinaca maamulka Somaliland.
Waxaa kale oo shalay galabtii lagu qabtay dhinaca xadka xiga degmada Daroor 90 maleeshiya ah oo aan labis wadan iyo hub aad u badan oo saaraan 7 gaadhi oo shacab ah oo wata sumada gaadiidka Somaliland.
Ciidamada degaanka SomalidaEthiopia ayaa arinta u arkay weerar cad oo maamulka gabaleedka Somaliland ku soo qaaday degaanka Somalida. Waxayna ku jawaabtay dawlada degaanku in ay amarto ciidanka degaanka iyo ciidanka qaran, kuwaas oo xidhay xadka. Tirada maleeshiyada ilaa iyo hada laqabtay ayey tiradoodu gaadhaysaa 115 iyo gaadiid dhan 12.
Maamul gabaleedka Somaliland ayaa u dhaqma si ka gadisan sida ay u dhaqmaan maamulada gabaleedyada kale Somaliya ee xadka la leh degaanka Somalida Ethiopia. Waxaa nabdoon xadka dheer ee labada dal marka laga reebo maamul gabaleedka Somaliland oo isagu u dhaqma sidii isaga oo maamula degaanka Somalida Ethiopia.
Arimaha ay caadaysteen masuuliyiinta iyo maamulka gabaleedka Somaliland, waa mid u jeedo leh, waxay marar badan iska soo galaan xadka ogaal la,aan waxayna ka sameeyaan wax walba oo ayna Ethiopia raali ka noqon karin.
Maamul gabaleedka Somaliland ayaa marar badan dhibaato ka gaystay degaamooyinka degaanka ee xiga xadka, waxayna ka gastaan dilal iyaga oo iska dhigaya ururka nabad diidka ah. Waxayna si ula kac ah u barakiciyaan dadweynaha reer miyiga ah iyaga oo ku soo hujuuma ciidan iyo colaad.
Waxaa kale oo ay dhawr goor oo isku xiga degaanka Somalida Ethiopia soo galiyeen maleeshiyaad ka tirsan ururka nabadiidka, kuwaas oo Doonyo kaga soo degay xeebaha maamul gabaleedka Somaliland.
Laba bilood ayaa laga joogaa kolkii shaqaale u shaqaynayey UN-ta, waaxada cuntada ee magaceed loo gaabiyo WFP laga af duubay degaanka Somalida Ethiopia mudana lagu haystay Hargeysa.
Degaanka Somalida Ethiopia ayaa xad dheer la leh dalka Somalia kamana dhacado dhibaato soo noq noqota meelaha kale, hase ahaatee maamulka gabaleedka waqooyi galbeed Somaliya waxaa uu wadaa weerar degaan durugsi ah oo u baahan in la fahmo.
Dhawaan ayey ahayd kolkii ay magaalada Hargeysa dad ka badan 6,000 oo ree Somaliland ah ay codsadeen in la siiyo dhalashada Ethiopia, arintaas oo aan wali go,aan laga gaadhin.
Dagaalkii sokeeye ee Somaliya sanooyinka ka socday maamul gabaldeedka Somaliland waxaa uu colaad iyo nacayb kala horyimid jinsiga Somalida, dagaaladan ay maanta ku qaadayaan shacabka degaanka Somaliduna waa mid la xidhiidha nacayba uu maamulku u hayo magaca Somalida.
Kal fadhiigii 2aad ee Jaaliyada Deeganka Somalida Itoobiya ee Norway oo ka dhacay Oslo.